RASMI: Juventus oo shaacisay xilliga ay soo bandhigi doonto tababaraheeda cusub ee Maurizio Sarri – Gool FM
(Italy) 17 Juuunyo 2019. Juventus ayaa maanta oo isniin ah ku dhawaaqday xilliga ay u soo bandhigi doonto tababaraheeda cusub ee Maurizio Sarri saxaafada.
War rasmi ah oo ay soo saartay kooxda Juventus ayaa lagu xaqiijiyay in tababaraha cusub ee Maurizio Sarri loo soo bandhigi doono saxaafada khamiista soo aadan Taariikhduna ay tahay 20-ka Juunyo, 11:00 am ee xiliga Talyaaniga.
Xaflada lagu soo bandhigi doono tababaraha cusub Juventus ee Maurizio Sarri, taasoo ka dhici doonta howlka shirarka ee garoonka Allianz ayaa waxaa kasoo qeyb gali doona madaxweynaha kooxda Andrea Agnelli, halkaasoo lagu weydiin doono su’aalo la xiriira qorshaha xilli ciyaareedka soo socda.
Macalinkii hore kooxda Chelsea ee Maurizio Sarri ayaa qandaraas seddex sanno ah u saxiixay kooxda heysata horyaalka Serie A ee Juventus, kaddib isbuucyo warar ah la xiriirinayay inuu ku biirayo Juventus.
Miyuu sii joogi doonaa Kylian Mbappe Kooxda PSG xilli ciyaareedka xiga? – Waxaa ka jawaabaya Nasser Al-Khelaifi